KULMIYE Party » Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Shaaciyey in Hab Cilmi-nafsi ah Lagu Dawayn Karo Tabashooyinka Saami-qaybsiga Somaliland Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Shaaciyey in Hab Cilmi-nafsi ah Lagu Dawayn Karo Tabashooyinka Saami-qaybsiga Somaliland – KULMIYE Party
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Shaaciyey in Hab Cilmi-nafsi ah Lagu Dawayn Karo Tabashooyinka Saami-qaybsiga Somaliland
HomeMurrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo Shaaciyey in Hab Cilmi-nafsi ah Lagu Dawayn Karo Tabashooyinka Saami-qaybsiga Somaliland
Murrashaxa KULMIYE: Inanta ku dhalatay Hargeysa waxa ay aamisantahay inay Somaliland leedahay, halka inanka jooga Sool amma Awdal uu rumaysan yahay in qolo gaar ah leedahay Somaliland
· Muuse Biixi oo ka jawaabay doorka haweenka iyo dhallinyaradu ka qaadan karaan talada qaranka Somaliland + caqabado ka soo baxay siyaasaddii waxbarashada bilaashka ah
“Wax aan annigu dul-qaad u aqaan ayuu Jaamac-na (qof kale) doqoniimo u yaqaan, wax aan doqoniimo u haysto ayuu qof kalena dulqaad u yaqaan”
Hargeysa (Jam)- Murrashaxa jagada Madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa shaaciyey in hab cilmi-nafsi maskaxmeed ah (Psychological) lagu dawayn karo tabashooyinka kala duwan ee la xidhiidha nidaamka saami-qaybsiga dalka Jamhuuriyadda Somaliland.
Gabadh ka mid ah ardayda Jaamacadaha dalka wax ka barata, ayaa murrashaxa KULMIYE weydiisay su’aal ahayd; “Mudane, haddii aad ku guulaysato madaxtinimada Somaliland heerkee ayaad gaadhsiin doontaa in aad haweenka ka qaybgeliso talada dalka? Waxaannu ku jawaabay; “Arrintaasi waxa ay u baahan tahay in laga wada hawlgalo oo meelaha talada dalka laga furfuro ay kaalin ka qaataan, haddii ay yihiin baarlamaanka (Guurtida iyo Wakiillada), saxaafadda ka mid tahay, anniguna dagaalkaas aan hormuud idiinku noqdo diyaar ayaan u ahay si aad u heshiisaan xuquuqdiina oo dhan wixii diinta islaamku idiin ogoshahay ee aan xad-gudub ku ahayn.”